1. Famaritana samy hafa: ny horonantsary PE dia fitaovana iray tena henjana, ary tsy mora ny manorotoro amin'ny crusher plastika tsotra. Satria malefaka sy henjana ny sarimihetsika PE, tsy mora ny manapotipotika, raha tsy hiteny ny hafanan'ny hafanana avo lenta amin'ny fitaovana hafainganam-pandeha, izay hahatonga ny LDPE hiempo sy doka ...
Mihena ny fanasokajiana sarimihetsika
Ny film shrink dia ampiasaina amin'ny fizotry ny varotra sy ny fitaterana vokatra isan-karazany. Ny asany lehibe indrindra dia ny fanamafisana, ny fandrakofana ary ny fiarovana ny vokatra. Ny sarimihetsika mihena dia tsy maintsy misy fanoherana ambony amin'ny puncture, fihenan-tsakafo tsara ary fihenan-tsakafo sasany. Nandritra ny fihenan'ny fizotrany dia tsy afaka mamokatra ...
Aza manontany ahy hoe inona ny sarimihetsika mampihena hafanana POF, lazao anao eto ambany?
Horonantsary mihena hafanana POF dia mihaona amin'ny fampiasana kaontenera fonosana amin'ny endriny samihafa. Ity sarimihetsika tsy misy poizina, tsy misy fofona, mahatohitra menaka ary manadio ara-tsakafo ity dia ahafahan'ny mpamorona mampiasa loko mahasarika maso hahatratrarana famolavolana marika 360 °. Omeo kilalao feno ny fahaiza-mamorona sy ny sary an-tsaina, mba ...
Misy fahasamihafana ve eo amin'ny sarimihetsika POF sy ny hafanana mihena? Ny POF dia midika hoe horonantsary mihena hafanana. Ny anarana fenon'ny POF dia antsoina hoe sarimihetsika multi-layer co-extruded polyolefin heat shrinkable film. Izy io dia mampiasa polyethylene ambany hakitroka toy ny sosona afovoany (LLDPE) sy ny co-polypropylene (PP) ho toy ny anatiny sy ivelany ...
Inona no maha samy hafa ny sarimihetsika mihena POF sy ny film polyvinyl chloride shrink?
Ny horonantsary mamofona hafanana POF misy sosona hafanana miisa dimy dia vokatra vaovao nipoitra tsikelikely tato anatin'ny taona vitsivitsy ary neken'ny olona. Ny polyene multi-layer co-extruded polyene miaro ny tontolo iainana dia miangona amin'ny hafanana mihena amin'ny hafanana POF dia mampiasa polyethylene ambany ambany (LLDPE) toy ny ...
Fampitahana ireo fananana ara-batana amin'ny sary mihetsika POF ary ny horonantsary mihena PE sy PVC?
1. Ny salan'isan'ny POF dia 0,92, ny hatevin'ny dia 0,012mm, ambany kokoa ny vidin'ny singa. Ny salanisan'ny PE dia 0,92, ny hatevin'ny dia 0,03 na mihoatra, ny vidin'ny singa iray dia ambony kokoa. Ny tahan'ny PVC dia 1.4, ny hatevin'ny dia 0,02mm, ny vidin'ny singa tena izy dia ambony kokoa. 2. Ny toetra ara-batana an'ny POF dia manify sy henjana, unif ...
Sarimihetsika Polyolefin Pof Shrink, Mihena horonan-tsary horonan-tsary, Famonosana Polyolefin Pof Shrink, Horonan-tsarimihetsika Vs Shrink Wrap, Mitete Film Pvc, Temperature famonosana polyolefin,